home-test | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
ဘုရားသခင်၏ ဂန္တဝင်နှုတ်ကပတ်တော်များ သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သူစစ်စစ် ဖြစ်သလော လူမျိုးအပေါင်းတို့၊ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ ဘုရားသခင် ကိန်းဝပ်သော ဇာတိပကတိ၏ အနှစ်သာရ
၁. နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၊ နောက်ဆုံးသော ကာလ၏ ခရစ်တော်သည် လူတို့ကို ခေတ်သစ် - နိုင်ငံတော်ခေတ်ထဲသို့ ဦးဆောင်ရင်း၊ ၎င်းတို့ကို တရားစီရင်ရန်နှင့် သန့်စင်ရန် နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖော်ပြသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း အမှုတော်ကို လက်ခံပြီး၊ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ ရေလောင်းပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံမှုတို့ကို မွေ့လျော်ခံစားသောသူတို့သာ အလင်းတွင် ဧကန်အမှန် နေထိုင်နိုင်ပြီး၊ ထိုသို့ဖြင့် သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနှင့် အသက် တို့ကို ရရှိနိုင်ပေသည်။
၃. ပညာသတိရှိသတို့သမီးများ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကိုကြားခြင်း
အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့် အမှုတော် - အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော် မွေးဖွားခြင်းနှင့် ကြီးထွားတိုးတက်ခြင်း သမိုင်းကြောင်း အပိုင်းတစ်- Myanmar Movie (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled? Full 2020 Myanmar Movie - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပါသည် Myanmar New Movie Full 2020- ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၃ - ထလော့ ကျွန်အဖြစ် မနေသောသူတို့) Myanmar Gospel Movie 2020 (ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ) | Clarifying the Connection Between the Bible and God Myanmar Christian Movie 2020 (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း) Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်)
ထာဝရ ဝေဒနာ မိမိတာဝန်အပေါ် မည်သို့သဘောထားသင့်ပုံ မီးဖြင့် ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင် | The Only Way to the Kingdom of Heaven Myanmar Subtitle Christian Movie - ရိုးသားသော လူများသာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးပေးခြင်း ခံရနိုင်သည် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ 2019 Myanmar Christian Movie (ကျွန်ုပ် လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။) | Be an Honest Man Blessed by the Lord
သခင်နောက်တစ်ကြိမ် ကြွလာတဲ့အခါမှာ လူသားဆီကို ဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာမလဲ။ စစ်မှန်သည့်ခရစ်တော်နှင့် မှားယွင်းသည့် ခရစ်တော်တို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ ဆန်းကြယ်မှု ချီဆောင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု တရားစီရင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်မှ စတင်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ လမ်းကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း ဖာရိရှဲတို့၏ အနှစ်သာရကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ထာဝရအသက်လမ်း၏ အရင်းအမြစ်
ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းသည် ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆီသို့ သွားရာလမ်းဖြစ်၏ အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂) ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သဘောထား အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာ (၁) အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ၁၀ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းအတွက် အသက်အရင်းအမြစ် ဖြစ်၏ (၄)
ယေရှု၏ တဖန်ကြွလာခြင်း စစ်မှန်သော ခရစ်တော် နှင့် အတုအယောင် ခရစ်တော်များ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း ချီဆောင်ခြင်း တရားစီရင်မှု ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ဖါရိရှဲများ ထာဝရအသက် လမ်း ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် သမ္မာကျမ်းစာ အသင်းတော်များ၏အနိဋ္ဌာရုံ
၄. သိုးသငယ်နောက်လိုက်ပြီး၊ သီချင်းအသစ်များကိုသီဆိုပါ။
Myanmar Music Video “ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သီချင်း- ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ” သံစုံတေးသီချင်း ဖန်ဆင်းရှင်သည် ကြီးမြတ်သည် - အရာခပ်သိမ်းအပေါ် အချုပ်အခြာအာဏာ စွဲကိုင်ထားသူ (Myanmar Language) Myanmar Song (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သီချင်း ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ် ရောက်လာ) God Has Come တေးဂီတ "ရှောင်ကျန်းရဲ့ ပုံပြင်" အဘယ်သူက သူ၏ စိတ်နှလုံး နှင့် ဝိညာဉ်ကို နိုးထစေခဲ့ သလဲ
ဘုရားသခင် အလွယ်တကူ စုံလင်စေနိုင်ရန် ဝန်ပိုထမ်းလော့ လူသားကိုကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်ကြီးစွာဒုက္ခခံစား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော တရားစီရင်ခြင်း စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးကို ချဉ်းကပ်လာ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၊ ချစ်ခင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးသူ
အနန္တတန်ခိုးရှင်ကြွဆင်းလာခဲ့တာ ကောင်းမြတ်လှပေစွ Myanmar Gospel Dance Song (ဘုရားသခင် မိမိဘုန်းတော်ကို အရှေ့အရပ်သို့ ယူဆောင်) Myanmar Gospel Dance song (နိုင်ငံတော်၌ အသစ်ပြုပြင်သော အသက်တာအတွက် ချီးမွမ်းပါ) Myanmar Praise And Worship 2019 (နှလုံးသားအပြည့်အဝဖြင့် ဘုရားကို ချီးမွမ်းခြင်း)
ထာဝရအသက်၏မူလအရင်းအမြစ် ကို သင်သိပါသလား အရာခပ်သိမ်းသည် ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ အာဏာ ထင်ရှားဖော်ပြမှု ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ လူကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည် ဘုရား စကားသည်လူသားတို့ လိုက်လျှောက်သင့်သောလမ်းခရီး
လူတို့၏ နိဂုံး အား သူတို့၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း ဘုရားဆုံးဖြတ်သည်
နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းသည် ဘုရား၏သြဇာအာဏာကို ပို၍ကိုယ်စားပြု၏
၅. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော် (နိုင်ငံတော် ဆင်းသက်ကြွလာခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်)
ဘုရားသခင်၏ အသံတော်အား နားထောင်ပြီး ခရစ်တော်ကို သိမြင်ပါ
ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်အဆင့်သုံးဆင့် ဘုရားသခင်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း နောက်ဆုံးသောကာလ တရားစီရင်မှု ခရစ်တော်အား သိခြင်း ဘုရားသခင်၏ အမည်နာမတော်များအကြောင်း ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပြည့်ဝသောကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ခေတ်နှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်အား သိရှိခြင်း ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဘုရားသခင် ထာဝရအသက် လမ်း ဘုရားသခင်ကို သိမြင်ခြင်း ချီဆောင်ခြင်း၏ စစ်မှန်သည့် အဓိပ္ပာယ် ဘုရားသခင်သည် တရုတ်ပြည်တွင် ဆင်းသက်ခဲ့ ပြီ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်နှင့် ဘာသာတရား ဖါရိရှဲများ သုံးပါးတစ်ဆူ သမ္မာတရားနှင့် အယူဝါဒများ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အား လိုက်လျှောက်ခြင်း စစ်မှန်သည့်လမ်းသည် အစဉ် ဖိနှိပ်ခံရသည်
၂) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့်မှ တစ်ခုစီ၏ အရေးပါမှုနှင့် ရည်ရွယ်ချက် ၁) ဘုရားသခင်၏ လူသားမျိုးနွယ်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ၄) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့်သည် လူတို့ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန်နှင့် စုံလင်စေခြင်းခံရရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်း နက်နဲလာသနည်း။ ၃) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့်မှ တစ်ခုချင်းစီအကြား ဆက်နွှယ်မှု။
၅) လူ့ဇာတိခံ ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားသခင်အသုံးပြုသည့် လူတို့အကြား ပဓာနကျသောကွဲပြားမှုများ ၁) ဘုရားသခင်သည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် လူ့ဇာတိခံယူပြီး အမှုတော်လုပ်ဆောင်ရန် လူသားအဖြစ်ပေါ်ထွန်းမည်ဟု သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်က ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ ၃) လူ့ဇာတိခံဘုရားသခင်၏ အမှုတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်ကြားတွင် မည်သည့်ကွဲပြားမှုများရှိသနည်း။ ၄) ဘုရားသခင်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ သူ၏တရားစီရင်ခြင်း အမှုတော်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် အဘယ်ကြောင့် လူသားကိုအသုံးမပြုသနည်း၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကိုယ်တော်တိုင် လုပ်ဆောင်ရပါသနည်း။
၁) ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် လူသားမျိုးနွယ်ကို ရွေးနုတ်ခဲ့သည်၊ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကိုယ်တော်သည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အဘယ်ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သေးသနည်း။ ၂) နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်း ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်သည်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ဖြူသောပလ္လင်ကြီး၏ တရားစီရင်မှုဖြစ်သည်။ ၃) နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်း ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်သည် လူသားမျိုးနွယ်ကို မည်ကဲ့သို့ သန့်စင်ပေးပြီး ကယ်တင်သနည်း။ ၅) နောက်ဆုံးသောကာလထဲက ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ကို ငြင်းပယ်သည့် ဘာသာရေးလောက၏ အကျိုးဆက်များနှင့် ရလဒ်
လူတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်၏ ဘုရားသဘာဝအနှစ်သာရကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ ၂) ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်လော၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်လော။ ၃) ခရစ်တော်က ဖော်ပြခဲ့သည့် သမ္မာတရားများကို အသိအမှတ်မပြုသည့် လူသား၏ ပြဿနာ၏ သဘောသဘာဝကား အဘယ်နည်း။ ခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင်အဖြစ် လူသားမှ သဘောမထားခြင်း၏အကျိုးဆက်ကား အဘယ်နည်း။
၃) ဘုရားသခင်၏ နာမတော် ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ အနှစ်သာရကား ဘယ်သောအခါမျှ မပြောင်းလဲပါ။ ၂) ဘုရားသခင်အမှုတော်တစ်ဆင့်ချင်းစီနှင့် ကိုယ်တော်၏နာမတော်အကြား ဆယ်နွှယ်မှု ၁) မတူညီသည့် ခေတ်ကာလများတွင် ဘုရားသခင်၌ အဘယ်ကြောင့် မတူညီသည့် အမည်နာမတော်များ ရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်များ၏ အဓိပ္ပာယ်များမှာ အဘယ်နည်း။ ၄) ဘုရားသခင်နာမတော်၏ အရေးပါမှုကို မသိခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်အသစ်ကို လက်မခံသည့် လူ့သား၏ ပြဿနာ သဘောသဘာဝကား အဘယ်နည်း။
ကယ်တင်ခံရခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းတို့၏ ပဓာနကျသော ကွဲပြားမှုမှာ အဘယ်နည်း။ ၁) ကယ်တင်ခံရသည်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
၂) ကျေးဇူးတော််ခေတ်တွင် သခင်ယေရှု အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ပုံနှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ်တွင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အမှုတော်ဆောင်ပုံအကြား မည်သည့်ကွဲပြားမှု ရှိပါသနည်း။ ကျေးဇူးတော်ကာလအတွင်း အသင်းတော်၏အသက်တာနှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ်အတွင်း အသင်းတော်၏ အသက်တာကြားတွင် မည်သည့်ကွဲပြားမှု ရှိပါသနည်း။ ၁) ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှု ဖော်ပြခဲ့သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ်တွင် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ဖော်ပြခဲ့သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များအကြား မည်သည့်ကွဲပြားမှု ရှိပါသနည်း။
၃) ပညတ်တော်ခေတ်တွင် ပရောဖက်များမှ ပို့ချခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လူ့ဇာတိခံဘုရားသခင်မှ ဖော်ပြခဲ့သည့် နှုတ်ကပတ်တော်များကြားတွင် ကွဲပြားမှုများမှာ အဘယ်နည်း။ ပညာရှိ အပျိုကညာများသည် အဘယ်သို့ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားပြီး သခင့်ကို ကြိုဆိုကြသနည်း။ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့် တရားဟောချက်များ- မိုက်မဲသော အပျိုကညာသည် အဘယ်ကြောင့် ဖော်ထုတ်ခံရပြီး ပယ်ရှင်းခံရပါသနည်း။ မိုက်မဲသော အပျိုကညာများသည် မည်သို့ ဖော်ထုတ်ခံရပြီး ပယ်ရှင်းခံရပါသနည်း။
၁) ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် လူသား၏လုပ်ဆောင်မှုကြားတွင် အဓိကကျသည့် ကွဲပြားမှုများက အဘယ်အရာများ ဖြစ်သနည်း။ ယုံကြည်သူများသည် ဘာသာရေးမှ ခွဲထွက်ဖို့နှင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လာဖို့ရန်အတွက် သိုးထိန်း အယောင်ဆောင်သောသူများနှင့် အန္တိခရစ်များကို ခွဲခြားသိမြင်ရမည်
၆) တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့ ချဉ်းကပ်ပြီး အသုံးပြုသင့်သနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ ရှိရင်းစွဲတန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။ ၃) သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ လူသားက စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ
၂) နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ဘုရားသခင်ဖော်ပြသော သမ္မာတရားများသည် ထာဝရအသက်လမ်း ဖြစ်သည် ၁) ကျေးဇူးတော်ကာလတွင် သခင်ယေရှုမှ ဖြန့်ခဲ့သော သတင်းစကားမှာ နောင်တတရားအတွက် လမ်းခရီးတစ်ခုသာဖြစ်သည် ၃) နောင်တလမ်းနှင့် ထာဝရအသက်လမ်းတို့အကြား ခြားနားမှုများ
ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းမှာ အဘယ်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာအသိပညာနှင့် ဓမ္မပညာသဘောတရားကို နားလည်ခြင်းကို ဘုရားသခင်အားသိခြင်းအဖြစ် ယူဆနိုင်ပါသလော။ ၅) ဘုရားသခင်သည် စကြဝဠာ လောကတစ်ခုလုံးကို မည်သို့အုပ်စိုးပြီး စီမံခန့်ခွဲသနည်း။ ၄) ယနေ့အချိန်အထိ ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်ကို မည်ကဲ့သို့ ဦးဆောင်၍ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သနည်း။
၂) စစ်မှန်သော ချီဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၁) ချီဆောင်ခံရခြင်းသည် လူသား၏အယူအဆများနှင့် စိတ်ကူးများအပေါ် မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များပေါ်တွင် အခြေခံရမည်
နောက်ဆုံးသောကာလတွင် တရုတ်ပြည်၌ ဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီ ဖြစ်သည်၊ ဤအရာအတွက် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ပရောဖက်ပြုချက်များနှင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင် မည်သည့်အခြေခံချက် ရှိသနည်း။ ၂) နောက်ဆုံးသော ကာလတွင် အမှုပြုဖို့ရန် တရုတ်ပြည်၌ ဘုရားသခင် လူဇာတိခံခြင်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် အရေးပါမှုများမှာ အဘယ်နည်း။
၂) ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်ကို လက်ခံပြီး နာခံသည့် အသင်းတော်ကိုသာ အဘယ်ကြောင့် ကောင်းချီးပေးသနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အဘယ်ကြောင့် ကျိန်ဆဲသနည်း။ ၁) ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၄) ဘာသာရေး သင်းအုပ်များနှင့် အကြီးအကဲများကို ဘုရားသခင်မှ အမှန်တကယ် ခန့်ထားခြင်းလော။ ဘာသာရေးသင်းအုပ်များနှင့် အကြီးအကဲများကို လက်ခံပြီး နာခံခြင်းက လူတစ်ဦး၏ ဘုရားသခင်အား နာခံပြီး လိုက်လျှောက်ခြင်းအား ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသလော။ ဘာသာရေးလောကတွင်၊ သမ္မာတရားနှင့်ဘုရားသခင်က တန်ခိုးကို ကိုင်စွဲထားသလော၊ သို့မဟုတ် အန္တိခရစ်များနှင့်စာတန်က တန်ခိုးကို ကိုင်စွဲထားသလော။ ၁) သခင်ယေရှုသည် ဖာရိရှဲများကို အဘယ်ကြောင့် ကျိန်ဆဲခဲ့သနည်း။ ဖာရိရှဲများ၏ အနှစ်သာရမှာ အဘယ်နည်း။ ၂) ဘာသာရေးသင်းအုပ်များနှင့် အကြီးအကဲများသည် ဖာရိရှဲများ၏လမ်းကြောင်းကို လျှောက်နေကြသည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ပြောရသနည်း။ သူတို့၏ အနှစ်သာရမှာ အဘယ်နည်း။
၃) စစ်မှန်သည့် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ကို သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားသခင်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှားပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည် ၂) သုံးပါးတစ်ဆူသည် ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိသော ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ဆိုရသနည်း။ ၁) ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးနှင့် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော စစ်မှန်သည့် ဘုရားသခင်မှာ တစ်ပါးတည်းလော၊ သို့မဟုတ် သုံးပါးလော။
သမ္မာတရားကား အဘယ်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ အသိပညာနှင့် အယူဝါဒမှာ အဘယ်နည်း။ ၃) နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ဘုရားသခင်ဖော်ပြခဲ့သည့် သမ္မာတရားက အဘယ်ကြောင့် လူသားကို သန့်စင်စေနိုင်ပြီး စုံလင်စေကာ လူသား၏အသက် ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ လူတစ်ဦးသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဓမ္မအသိပညာကို တည်မှီပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါက မည်သည့်အကျိုးဆက်များ ရှိမည်နည်း။
၂) လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကိုသာ မွေ့လျော်ပါက ယင်းသည် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း၏ စစ်မှန်သော သက်သေခံမှု ဖြစ်ပါသလော။ ၃) ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်သောသူ တစ်ဦးဆိုသည်ကား အဘယ်နည်း။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း၏ စစ်မှန်သော သက်သေခံမှုက အဘယ်နည်း။ ၁) ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်ခြင်းက အဘယ်နည်း။ လူတစ်ဦးသည် သခင်အတွက် တရားသာဟော၍ အလုပ်ကိုသာ လုပ်ဆောင်ပါက ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်ခြင်းလော။
၁) တရုတ် ကွန်မြူနစ် အစိုးရသည် အဘယ်ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်နှင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်ကို ပြင်းထန်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊ ဖိနှိပ်ပြီး ဖြိုခွင်းသနည်း။ ၂) ဘာသာရေးလောကသည် အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်ကို အမြဲ ငြင်းပယ်ခဲ့၊ ကိုယ်တော်အား ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်တော်အား ရှုတ်ချကာ၊ ဤသည်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ဆဲခြင်းကို ခံစားကြရသနည်း။
မေးခွန်း (၁)- သခင်ယေရှုက အခု ပြန်ကြွလာပြီဖြစ်ပြီး သူဟာ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ အမည်နာမအသစ်ရှိပါတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဟာ နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ စာအုပ်ထဲက နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဲဒါက မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ရဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့မှာ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတော်တော်များများက ဘုရားသခင်ရဲ့အသံကို မခွဲခြားနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်က ညီမရှန့်ကို ဖိတ်ထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့အသံကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိတ်သဟာယပြုဖို့အတွက် သူတို့ကို ဖိတ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ဟာ သခင်ယေရှု ပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုအတည်ပြုမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့သိလာလိမ့်မယ်။ မေးခွန်း (၁)- သခင်ယေရှုဟာ တို့တွေအတွက် ကားတိုင်ထက်မှာ အသေခံခဲ့ပေးပြီးပြီ တို့တွေရဲ့အပြစ်တွေကနေ ရွေးနုတ်ခဲ့ပြီး တို့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ တို့တတွေ ဆက်လက် အပြစ်ပြုကြပြီး သန့်စင်ခံရဖို့ လိုနေကြသေးပေမယ့်လည်း ကိုယ်တော်ဟာ တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ သူ့အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်ပြီး တို့တွေကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခဲ့တယ် တို့တွေ ကိုယ်တော့်အတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရင်း ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ခံထမ်းပြီး ပေးဆပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး တို့ဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါဟာ ကိုယ်တော့်ကတိတော်ပဲလို့ ထင်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့လည်း ခုချိန်မှာ တချို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဟာ ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေထုတ်လာကြတယ် သူတို့ပြောလာတာက တို့တွေဟာ ကိုယ်တော့်အမှုတော်ကိုဆောင်နေကြပေမဲ့လည်း မကြာခဏ အပြစ်ပြုလိုက်၊ နောင်တရလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်၊ ခုထိလည်း ဘာစင်ကြယ်မှုမှမရကြသေးဘူး ကိုယ်တော်ဟာ သန့်ရှင်းတော်မူတာကြောင့် မသန့်ရှင်းတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်တော့်ကို မဖူးတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောလာကြတယ် ကျွန်မ မေးချင်တာက တို့တွေ ကိုယ်တော့်အတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ပြီး အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဟာ တကယ်ပဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ကို ရစေနိုင်မှာလား ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို တို့တွေ တကယ်ပဲ သဘောမပေါက်သေးလို့ပါ၊ ဒီအကြောင်းကို ဆွေးနွေးပေးစေချင်တယ်။
ညှင်းဆဲခံရခြင်း မှတ်တမ်းများ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ကျောင်ယွမ်အမှု သမ္မာတရားကို စေ့စေ့ကြည့်ခြင်း ကောလဟာလများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု (တရားခံဟာ ဘယ်သူလဲ) Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၂ (မိုးမသောက်ခင် မှောင်မိုက်ချိန်) Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု မှတ်တမ်းများ (မကောင်းမှုကို ဖုံးကွယ်ခြင်း) Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၅ (ကျရှုံးလုဆဲဆဲမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း)
မေလ၂၈ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဇောင်ယွမ်အမှု၏ နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်ခဲ့သူက တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဖြစ်သည် သေစေနိုင်သည့် မသိမြင်မှု - စစ်မှန်သည့်လမ်းအား စူးစမ်းရှာဖွေရာတွင် မည်သူ၏ စကားများအား အလေးပေးသင့်သနည်း
(ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် အဘယ်ကြောင့် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြသနည်း - အပိုင်း (၇) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် အဘယ်ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော်ကို ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြသနည် - အပိုင်း (၆)
အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဘုရားမဲ့ အယူအဆသွတ်သွင်းမှုအား ခရစ်ယာန်များ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပုံ (အပိုင်း ၂/၆) အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကောလာဟလများနှင့် အသရေဖျက်မှုတို့အပေါ် ခရစ်ယာန်များ၏ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာ ချေပချက်များ (အပိုင်း ၃/၆) အိမ်တွင်းမှ လက်ဝဲပညာပေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၏ အရင်းအမြစ်နှင့် ရလဒ် (အပိုင်း ၃/၇) အိမ်တွင်းမှ လက်ဝဲပညာပေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - ခရစ်တော်ကို စီစီပီမှ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ရှုတ်ချခြင်းနောက်ကွယ်က တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်များ (အပိုင်း ၆/၇)
နိနေဝေမြို့သားတို့၏ နှလုံးသားအတွင်းမှာ ရိုးသားဖြူစင်သည့် နောင်တရခြင်းကို ဘုရားသခင် မြင်သည် သခင်ယေရှု သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်အပြီးမှာ သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့ စကားများ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို သားပေးမည်ဟု ကတိပေးသည် ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့ကို ဖျက်ဆီးရမည်
သုံးပါးတစ်ဆူသင်းအုပ်ဆရာ၏ အယူအဆများအပေါ် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၏ အံ့သြဖွယ်ချေပချက် ကောင်းမွန်သည့် ဘာသာတရားဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဆိုးယုတ်သည့် အစွန်းရောက်ဝါဒဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဘုရားမဲ့ အယူအဆသွတ်သွင်းမှုအား ခရစ်ယာန်များ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပုံ ခရစ်တော်အကြောင်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ ကောလာဟလများနှင့် သွားပုပ်လေလွင့်ပြောစကားများကို ခရစ်ယာန်များ၏ မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ ပြန်လည်ခုခံချေပမှုများ
၆、တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဘုရားသခင်က အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်သူများ အုပ်စုတစု ကိုတည်ထောင်ထားသည်။ (သူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ သူတို့သည်ကြီးမြတ်သော အနီရောင်နဂါးကို အသေအချာ သစ္စာဖေါက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုဘုရားသခင်က လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။)
အောင်မြင်သောသူများ၏ သက်သေခံခြင်းများ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း သက်သေခံခြင်းများ အံ့ချီးဖွယ်ရာ ကယ်တင်ခြင်း
Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၂ (မိုးမသောက်ခင် မှောင်မိုက်ချိန်) Myanmar Christian Movie 2019 (ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ မုသားများ) Myanmar New Movie 2019 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု (တရားခံဟာ ဘယ်သူလဲ) Myanmar Christian Movie (အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း)
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များက သက်သေခံဖို့ ကျွန်မကို ဦးဆောင်ခဲ့သည် ဆိုးယုတ်သော ဖိနှိပ်မှုမှ ထမြောက်ခြင်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့် လမ်းပြခံရလျက်၊ အမှောင်အင်အားများ၏ ဖိနှိပ်မှုကို ကျွန်ုပ် အောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့သည် လူငယ်ဘဝ၏ အရွယ်ကောင်းသောအချိန်ကို အကျဉ်းထောင်၌ ကုန်ဆုံးခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် အခက်အခဲတို့ အလယ်တွင် နိုးထခြင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ၏ ရက်စက်မှုကို အောင်မြင်ကျော်လွှားဖို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်မကို လမ်းပြသည်
Myanmar Subtitle Christian Movie - ရိုးသားသော လူများသာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးပေးခြင်း ခံရနိုင်သည် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ 2019 Myanmar Christian Movie (ကျွန်ုပ် လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။) | Be an Honest Man Blessed by the Lord
ဘေးဒုက္ခများထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှုကို ရရှိသည့်နည်းလမ်း (နောဧနေ့များ ရောက်လာကြပြီ) မြန်မာဇာတ်ကား - ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှုနှင့်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ
ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်မကို နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက် လမ်းပြတော်မူခဲ့သည် ဆုတောင်းခြင်း၏ တန်ခိုး- ကားမတော်တဆမှုတွင် နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကို သူမ မျက်မြင် ကြုံလိုက်ရသည် ယုံကြည်ခြင်း သက်သေခံချက်- ဘုရားသခင်အပေါ် မှီခိုပြီးနောက်တွင် အသက်ကြီးသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အသည်းရေဖျဉ်းစွဲခြင်းက အံ့သြဖွယ်ရာ ပျောက်ကင်းသည်
ဝိညာဉ်ရေးရာရှုပ်ထွေးမှုများအား ဖြေရှင်းခြင်း ကျော်ကြားမှုနှင့်ငွေကြေး နေ့စဉ် ဝတ်ပြုခြင်းများ
48:27 အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်၏ မူလအစနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံ
နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ခရစ်တော်၊ ပြန်၍ကြွလာသော သခင်ယေရှုဖြစ်သည့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့် အမှုတော်တို့ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ပေါ်ပေါက်လာကာ ကိုယ်တော်ရှင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စီရင်ခြင်းနှင့် ဆုံးမခြင်းအရ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ အသင်းတော်ကို နောက်ဆုံးသောကာလ၏ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို စစ်မှန်စွာ လက်ခံသူများ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား၏။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် လုံးဝတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ကိုယ်တော်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ လမ်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်လူသား တစ်ဦးမျှ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှုနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမမှု၌ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို မြင်ခြင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ခရစ်တော်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏အမှုတော် နောက်ခံအကြောင်း နိဒါန်းအကျဉ်းချုပ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ဧဝံဂေလိတရား ဖြန့်ဝေခြင်း ဘုရားသခင်ကို ကားစင်တဖန်တင်၍ ကွပ်မျက်သူတို့ အမင်္ဂလာရှိစေသတည်း